आज बाट १६ सराद्ध प्रारम्भ : आजको राशि हेर्नुहोस्, यी ४ राशि भएकाले निकै धन कमाउने योग
केही मनोरञ्जनको लागि आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किने प्रयास गर्नुहोस्। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ।
तपाईंसँग राय मागे नलजाइकन दिनुहोस् किनभने यसको लागि तपाईंको अत्यधिक कदर गरिनेछ। आफ्नो जोडीको जरुरी कामले गर्दा तपाईंको दिनको योजना बिग्रिन सक्छ, तर अन्तमा तपाईंले यो राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
तपाईंले प्रशंसा गरेर अरू मान्छेहरूको सफलताको आनन्द पाउने सम्भावना छ। तपाईंको उट्पट्याङ्गको व्यवहार भए तापनि तपाईंको जोडीले सहयोग गरिरहनेछ। यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्।
तपाईंले आफ्नो कार्यमा ध्यान दिनुभयो भने – आफ्नो उत्पादन दोब्बर गर्न सक्नुहुन्छ। खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने तपाईंको क्षमताले आदर पाउनुहुनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई दुनियामा उसको अर्को कोही छैन भन्ने महसुस गराउनेछ।
आज यदि तपाईंले चिनेका मान्छेमा कुनै पनि निर्णय थोप्ने प्रयास गर्नुभयो भने – तपाईंले आफ्नै चासोको मर्माहत हुने मात्र अन्त गर्नुहुनेछ – धैर्यपूर्ण तरीकाले स्थितिलाई स्याहार्नु नै अनुकूल परिणाम पाउने तरिका हो। कसैको लागि पार्ट टाइम चाकरी। आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ।
तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या भएकोले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा जान असमर्थ हुनाले केही बाधाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर आफुलाई यसबाट छुटाउन आफ्नो तर्कको प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। तपाईंले आफ्नो योजनामा आफ्ना साझेदारहरूलाई पत्यार गराउँदा समस्या पर्नेछ।
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो।
तपाईं प्रेममा बिस्तारै तर निरंतर जल्नु हुनेछ। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। आफ्नो जोडीको घट्दो स्वास्थ्यको कारण तपाईंलाई तनाउ हुन सक्छ।
तपाईंले सकारात्मक दृष्टिकोण र विश्वासले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। आफ्नो प्रियको। आज उँचो प्रदर्शन र उँचो प्रोफाइलको लागि दिन हो। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
तपाईंको हँसिलो मनले तपाईंको इच्छित बल दिन्छ र तपाईंलाई विश्वस्त राख्नेछ। बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ – त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ। साझेदारी परियोजनाहरूले सकारात्मक परिणाम दिनु भन्दा बढी समस्याको सिर्जना गर्नेछन् – तपाईं विशेष गरी कसैले तपाईंसँग फाइदा उठाउनको लागि आफैंले अनुमति दिएकोमा आफैमाथि रिसाउनु हुनेछ।
तपाईं आज ऊर्जाले पूर्ण हुनुहुनेछ र असाधारण कुरा गर्नुहुनेछ। विभिन्न स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंलाई सहयोग र प्रेम प्रदान गर्नेछन्।
तपाईं विदेशी जागिरको लागि आवेदन गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – आज राम्रो दिन जस्तो देखिन्छ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंको प्रतिष्ठामा केही धेरै असर गर्न सक्छन्।
तपाईंको शङ्कालु व्यवहारले हारको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर्क र टकराव अनि अरूमा अनावश्यक दोष खोज्नेबाट बच्नुहोस। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ?
तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। रचनात्मक प्रकृतिकका कार्यहरूमा संलग्न हुनुहोस्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्यले केही चिन्ता गराउँछ। तपाईंले नगर्ने कुरा अरूलाई जबरजस्ती गराउने प्रयास गर्नुहोस्।
आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। आफ्नो वैवाहिक जीवनका धेरै उकाली र ओराली पछि, आज एकअर्काप्रति आफ्नो प्रेम देखाउने सुनौलो दिन हो।
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ।
कुनै पनि संयुक्त उद्यममा प्रवेश नगर्नुहोस् – किनकि साझेदारहरूले तपाईंको फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। छोराछोरीको अप्रत्याशित समाचारले मन खुसी गराउँछ ।
तपाईंको मनमा भएको कुरा भन्न नडराउनुहोस्। तपाईंले आफ्नो जोडीबाट कम ध्यान दिइएको महसुस गर्न सक्नु हुनेछ, तर दिनको अन्तमा उनी तपाईंको लागि नै व्यवस्था गर्न व्यस्त थिए भन्ने बुझ्नु हुनेछ।
Prev“म पुरै खुलेर भन्छु, मेरो समर्थन केपी ओलीलाई मात्रै छ अरूलाई छैन”: मन्त्री योगेश भट्टराई
Nextकोरोनाको माहामारिका बेला चीनले दियो नेपाललाई ठुलो झटका: एकपटक हेर्नै पर्ने